Home Wararka Shirkii Midowga Musharaxiinta & Dowlad Goboleedka oo fashil ku soo dhamaaday
Shirkii Midowga Musharaxiinta & Dowlad Goboleedka oo fashil ku soo dhamaaday
Waxaa dhawaan soo gabagaboobay shirkii u dhaxeeyay Dowlad Goboleedyada iyo Midowga Musharaxiinta. Shirka oo lagu dhageeystay cabashooyin ka yimid Midowga Musharaxiinta ayaa ku soo dhamaaday fashil iyo is afgarad la’aan.
Dowlad Goboleedyada ayaa iska difaacay eedeymihii ay soo jeediyeen Midowga Musharaxiinta. Waxa ayna madaxda Dowlad Goboleedka ku doodeen in ay sharci u leeyihiin in ay iyaga maamulaan Doorashada.
Sacid Deni oo ka jawaabayay eedeeymo loo soo jeediyay oo la xiriira in uu isaga musharax yahay ayaa si jees jees ah ugu sheegay Midowga Musharaxiinta in uu xaq u leeyahay in uu musharax noqdo Sida qof kastaa oo Soomali ah musharax u noqon karo.
Shirka ayaa lagu soo kala tagay iyaga oo aan waxba la isla meel dhigin. Waxaana muuqata in Dowlad goboleedyadda ku adkeeysanayaan in ay meelmariyaan habraaca Doorashada ay shalay saxiixeen.